Maxaad noo Dooratay - Jiangyin Unite Top Heavy Industry Co., Ltd.
7 SABABO OO AAN KU DOORAN KARNO
Waxaan leenahay tayo sare, hufnaan sare, Awoodda R & D ee kooxda farsamada. Shirkaddu waxay leedahay laf-dhabarka farsamada, farsamada hawo-qaadashada waxay ka dhigtaa waayo-aragnimo ka badan 25 sano, waxay siisaa macaamiisha mashiinno dib-u-warshadeyn dhammaystiran oo kharash-ku-ool ah iyo xalal.
8 wuxuu dejinayaa khadadka wax soo saarka ee soo kabashada ee macaamiisha gudaha iyo kuwa ajaanibta ah si loo siiyo dhibaatooyin biro xirfad leh iyo biro aan biraha ahayn. kuwaas oo ku habboon warshadaha waaweyn ee birta iyo warshadaha dib-u-warshadaynta.Wershadaha dhalaaliya birta badan.
Dhammaan taarikada birta ah ee loo adeegsaday qalabka waxaa laga sameeyay Q235, 45 #, 16Mn, 65Mn iyo qeexitaanno kale oo kala duwan oo ka yimid soo saaraha birta caanka ah ee guryaha. Taarikada dharka xiran ee qolka quudinta waxaa laga sameeyaa NM500 waxayna dammaanad ka qaadaysaa tayada ugu sareysa iyo nolol dheer.
Waxaan soo saari doonaa qaar ka mid ah moodooyinka kulul ee mashiinka wakhtiga ka hor, taas oo si weyn u gaabin doonta waqtiga dhalmada.
Waxaan ku haynaa 10 xariiq oo wax soo saar warshada ah. Hogaamiyaha kooxda ee khad kasta oo wax soo saar ayaa mas'uul ka ah dhamaan nidaamka wax soo saarka mashiinka. waxay leedahay gebi ahaanba in kabadan 150 nooc oo ah mashiinka noocyada waaweyn ee caajis iyo mashiinka axdi qarameedka, latheynta NC, mashiinka goynta NC, xarunta makiinada CNC iyo qodista godka qoto dheer iyo mashiinka caajiska ah, tayada xiriiriye kasta ayaa la xakameeyaa.
Kahor intaanu mashiinku ka bixin warshada, qof gaar ah ayaa mas'uul ka noqon doona hawlgalinta mashiinka wuxuuna bixin doonaa adeegga kormeerka fiidiyowga. Bixiyaan 24-saac adeegyo la-talin farsamo oo khadka tooska ah ah, rakibidda albaab ilaa albaab iyo adeegyo dayactir kadib iibka adduunka oo dhan.
Caymiska suuqa ee Unite Top brand Haydarooliga ayaa haysa hogaan aamin ah warshadaha Shiinaha. Badeecooyinka waxaa loo iibiyaa in ka badan 30 dal iyo aagagga suuqyada Yurub, Aasiya iyo Ameerika.
Mashiinka Birta Briquette, Mashiinka Haydarooliga / Aluminium Wuu Cadaadi Karaa Mashiinka, Sheet Birta Baler, Sheeko Gaab ah oo loogu talagalay Mobile Digger, Horjooge Baler Aluminium Iskaraab Aluminium ah, Baler Xadhig Baler,